VIDEO:Daawo daqiiqadii uu dhacay qaraxii Tiyaarayarka & hadalkii Gaas ee socdey – SBC
VIDEO:Daawo daqiiqadii uu dhacay qaraxii Tiyaarayarka & hadalkii Gaas ee socdey
Posted by editor on April 4, 2012 Comments
Sida wararka aad kula socoteen magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qarax culus oo geystey dhimasho iyo dhaawac kaasi oo sida la sheegay ay fulisay haweenay isku soo xirtey waxyaabaha qarxa.
Hadaba qaraxaasi ayaa dhacay xili uu hadlayey Ra’isalwasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas), iyadoo jawiga goobtaasi uu isbadalay hal mar kaasi oo si qurux badna ku socdey intii qaraxu aanu dhicin.
Qaraxa intii aanu dhicin Ra’isalwasaaruhu wuxuu ka soo kacay halkii uu fadhiyey wuxuuna soo istaagey halkii laga khudbeynayey isagoo hadalkiisa markii uu marayey meel dhexe hal mar uu dhacay qarax aad u xoogan kaasi oo keenay in jawigii goobtu isbadalo isla markaana lagu kala cararay oo dhiig iyo xinjiro ay meel kasta ku firdhadeen.
Ra’isalwasaaraha oo wajigiisa ay ka muuqatey farxad isla markaana sacab fara badan loo tumayey hadaladiisa iyadoo ay hareerihiisa taagnaayeen wasiiro iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaa waxaa hal mar dhacay dayaanka qaraxa oo hakad gaiyey hadalkiisii taasi oo keentey in dhamaan dadkii goobta ku sugnaa oo uu ka mid ahaa Ra’isalwasaaruhu ay ka gambadaan goobtana lagu kala cararo.
Link-ga hoose ka daawo jawiga goobtaasi sida uu isku badaley daqiiqadii qaraxu dhacay.